Wararka Maanta: Sabti, Mar 3 , 2018-Tartan kubadda cagta ah oo u dhexeeya ardayda iskuulaadka oo ka furmay Kismaayo [SAWIRRO]
Xafladdii furitaanka tartanka oo shalay gelinkii danbe ka dhacday garoonka Waamo ayaa waxaa ka qeybgalay ku simaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha Jubbaland, masuuliyiinta xiriirka kubadda cagta Jubbaland iyo kan gobolka J/hoose, tartameyaasha iskuulaadka Kismaayo iyo taageerayaal.
Kooxda Baambeeyda oo garaaceeysay Muusik-ga heeso wadani ah iyo Tartameyaasha 14-ka kooxood ee mataleeysay Iskuulaadka Kismaayo ayaa kusoo wareegay Garoonka, ayadoo koox walba ay sidatay boor uu ku qoranyahay magaca Iskuulka ay mataleeyso.
Wasiirka dhalinyardaa iyo cayaaraha Jubbaland Mudane C/waaxid Axmed Yare oo madasha ka hadlay ayaas heegay in tartankan yahay mid lagu dhiirigelinayo ardeyda, laguna xoojinayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada, isagoo xusay in ay doonayaan in ardeyda Iskuuaadlka Kismaayo isku bartaan.
Masuuliyiinta xiriirka kubadda cagta ayaa sheegay in tartanku noqon doono is reeb-reeb oo kooxdii laga badiyo ay hari doonto, waxaana shalay gelinkii danbe lagu furay kooxaha Farjanno iyo Iftiin, ayadoo ay guusha raacday kooxdii u tartameeysay Iskuulka Iftiin oo ku badisay 2-1.
3/3/2018 6:22 AM EST
Sabti, Maarso, 03, 2018 (HOL)-Xog-hayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqasho ku kala bixin doona dalal ka tirsan Qaaradda Afrika, si uu u xoojiyo cilaaqaadka iyo iskaashiga Mareykanka la leeyahay Afrika.